“Ivai Vakasvinurira Kunyengetera” | Yokudzidza
“Ivai nepfungwa dzakanaka, uye ivai vakasvinurira kunyengetera.”—1 PET. 4:7.
Unofanira kugara uchipa minyengetero yorudzii?
Nei vaKristu vechokwadi vachifanira kuramba vachinyengetera?
Ndiani anobatsirwa paunonyengeterera vamwe?
1, 2. (a) Nei zvichikosha kuva “vakasvinurira kunyengetera”? (b) Mibvunzo ipi ine chokuita nokunyengetera yatinofanira kuzvibvunza?
MUMWE munhu aimboshanda usiku anoti, “Hazvisi nyore kuramba wakamuka kana kunze kwava kuda kuedza.” Vamwe vanoshanda usiku hwose vangabvumiranawo nazvo. VaKristu vemazuva ano vanosanganawo nedambudziko rakafanana neiri nokuti nyika yaSatani yakaipa yavawo munguva yakaoma yakaita sousiku hwafamba chaizvo. (VaR. 13:12) Zvaizova nengozi chaizvo kurara paawa ino yokupedzisira! Zvinokosha chaizvo kuva “nepfungwa dzakanaka” uye kuteerera zano romuMagwaro rokuva “vakasvinurira kunyengetera.”—1 Pet. 4:7.
2 Tichifunga nezvenguva yatiri kurarama, zvakanaka kuzvibvunza kuti: ‘Ndakasvinurira zvakadini panyaya yokunyengetera? Ndinopa minyengetero yorudzi rwose here uye ndinonyengetera nguva dzose here? Ndinogara ndichinyengetererawo vamwe here kana kuti ndinongonyengeterera zvandinoda chete? Uye munyengetero unondibatsira sei kuti ndipone?’
RAMBAI MUCHIPA MINYENGETERO YORUDZI RWOSE
3. Ndeapi mamwe marudzi eminyengetero?
3 Mutsamba yaakanyorera vaEfeso, muapostora Pauro akataura nezve“kunyengetera kworudzi rwose.” (VaEf. 6:18) Muminyengetero yedu, zvimwe tinogara tichikumbira Jehovha kuti atipe zvatinoda uye kuti atibatsire kukunda miedzo. “Munzwi womunyengetero” anonyatsoteerera patinomukumbira kuti atibatsire. (Pis. 65:2) Zvisinei, tinofanirawo kufunga nezvemamwe marudzi eminyengetero. Minyengetero iyi inosanganisira yokurumbidza, yokuonga uye yokuteterera.
4. Nei tichifanira kurumbidza Jehovha kakawanda muminyengetero yedu?
4 Pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti titaure mashoko okurumbidza Jehovha muminyengetero yedu. Somuenzaniso, tinonzwa tichida kumurumbidza patinofunga “mabasa ake esimba” uye “ukuru hwake.” (Verenga Pisarema 150:1-6.) Ndima nhanhatu dzePisarema rechi150 dzinototikurudzira ka13 kurumbidza Jehovha! Achiratidza kuremekedza Mwari zvikuru, munyori werimwe pisarema akaimba kuti: “Ndakakurumbidzai kanomwe pazuva nokuda kwezvamakatonga zvakarurama.” (Pis. 119:164) Chokwadi Jehovha anofanira kurumbidzwa. Saka hatifaniri here kumurumbidza muminyengetero yedu “kanomwe pazuva,” kureva kuti kakawanda?
5. Kuva nemafungiro okuonga patinonyengetera kunotidzivirira sei?
5 Minyengetero yokuonga inokoshawo chaizvo. Pauro akakurudzira vaKristu vaiva muguta reFiripi kuti: “Musazvidya mwoyo pamusoro pechinhu chero chipi zvacho, asi muzvinhu zvose kukumbira kwenyu ngakuziviswe Mwari nokunyengetera nokuteterera pamwe chete nokuonga.” (VaF. 4:6) Kunyengetera kuna Jehovha tichimuonga nomwoyo wose kunotidzivirira. Kunotonyanya kutidzivirira iye zvino, sezvo tichirarama mumazuva ekupedzisira ane vanhu “vasingaongi.” (2 Tim. 3:1, 2) Chokwadi nyika yakazara nevanhu vane mafungiro okusaonga. Kana tikasangwarira, zviri nyore kuti tipedzisire tavawo nemafungiro iwayo. Kunyengetera kuna Mwari tichimuonga kunoita kuti tigutsikane uye kunoita kuti tisava ‘vagunun’uni uye vanyunyuti pamusoro pomugove wedu muupenyu.’ (Jud. 16) Uyewo, kana vanababa vakataura mashoko okuonga pavanonyengetera nemhuri dzavo, zvinokurudzira madzimai nevana vavo kuti vave vanhu vanoonga.
6, 7. Kuteterera kuita sei uye inyaya dzipi dzatingateterera kuna Jehovha?
6 Kuteterera zvinoreva kunyengetera nemwoyo wose uchiratidza manzwiro akadzama aunenge uchiita. Zvii zvatingataura kuna Jehovha tichiita zvokuteterera? Tinogona kuteterera patinenge tichitambudzwa kana kuti tichirwara zvakanyanya zvokuti tinogona kufa. Pakadaro, minyengetero yedu yokukumbira kubatsirwa naMwari inobva yava yokuteterera. Asi apa ndipo chete patinofanira kuteterera Jehovha here?
7 Chimbofunga zvakataurwa naJesu mumunyengetero wokuenzanisira woona zvaakataura nezvezita raMwari, Umambo hwaMwari, uye kuda kwake. (Verenga Mateu 6:9, 10.) Nyika ino yazara uipi uye hurumende dzevanhu dziri kutadza kupa vanhu zvinhu zvokurarama nazvo. Chokwadi tinofanira kunyengetera kuti zita raBaba vedu vokudenga ritsveneswe uye kuti Umambo hwavo hubvise utongi hwaSatani. Ino inguvawo yokuti titeterere kuna Jehovha kuti kuda kwake kuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. Saka ngatirambei takasvinurira, tichigara tichipa minyengetero yerudzi rwose.
8, 9. Nei tisingafaniri kushora Petro nevamwe vaapostora kuti vakabatwa nehope mumunda weGetsemane?
8 Kunyange zvazvo muapostora Petro akakurudzira vaKristu ‘kusvinurira kunyengetera,’ pane imwe nguva akambotadzawo kusvinurira kunyengetera. Aiva mumwe wevadzidzi vakabatwa nehope Jesu paainyengetera mumunda weGetsemane. Kunyange zvazvo vakaudzwa naJesu kuti ‘varambe vakarinda uye varambe vachinyengetera,’ havana kuita izvozvo.—Verenga Mateu 26:40-45.
9 Zvisinei, pane kushora Petro nevamwe vaapostora nokuti vakatadza kuramba vakamuka, tinofanira kuyeuka kuti vainge vaswera vachiita zvinhu zvakaita kuti vapedzisire vaneta. Usiku ihwohwo vainge vagadzirira uye vachengeta Paseka. Uye Jesu akatanga Kudya kwaShe Kwemanheru, achitisiyira muenzaniso wezvinofanira kuitwa pakuchengeta Chirangaridzo chorufu rwake. (1 VaK. 11:23-25) “Pashure pokunge vaimba nziyo dzokurumbidza, vakabuda vakaenda kuGomo reMiorivhi” vachifamba nemumigwagwa yeJerusarema. (Mat. 26:30, 36) Panguva iyoyo, zvinoita sokuti nguva dzainge dzatopfuura pakati pousiku. Kudai takanga tirimowo mumunda weGetsemane, zvimwe taizobatwawo nehope. Pane kushora vaapostora vake vainge vaneta, Jesu akataura kuti “mudzimu unoda, asi nyama haina simba.”
Kunyange zvazvo Petro akagumburwa, akadzidza kuva ‘akasvinurira kunyengetera’ (Ona ndima 10, 11)
10, 11. (a) Petro akadzidzei pane zvaakaita mumunda weGetsemane? (b) Unodzidzei pane zvakaitika kuna Petro?
10 Zvakaitika mumunda weGetsemane zvakazobatsira Petro. Akadzidza pakutadza kusvinurira kwaakaita. Jesu ainge ambotaura kuti: “Imi mose muchagumburwa nezvichaitika kwandiri usiku huno.” Uye Petro akamupindura kuti: “Kunyange zvazvo vamwe vose vakagumburwa nezvichaitika kwamuri, ini handizombogumburwi!” Jesu akabva ataura kuti Petro aizomuramba katatu. Petro akaramba zvaitaurwa naJesu achiti: “Kunyange kana ndichifanira kufa nemi, handizombokurambii.” (Mat. 26:31-35) Asi Petro akazogumburwa sezvainge zvataurwa naJesu. Paakaramba Jesu kekupedzisira, akarwadziwa “akasvimha misodzi kwazvo.”—Ruka 22:60-62.
11 Chokwadi Petro akadzidza kubva pane zvakaitika kwaari uye akakunda dambudziko rake rokunyanya kuzvivimba. Zviri pachena kuti kunyengetera ndiko kwakamubatsira kuti akurire dambudziko rake. Petro ndiye akatozotaura mashoko okuti “ivai vakasvinurira kunyengetera.” Tiri kuteerera here zano iroro rakafemerwa? Uyewo, ‘tinoramba tichinyengetera’ here kuratidza kuti tinovimba naJehovha? (Pis. 85:8) Tinofanirawo kugara tichiyeuka zano romuapostora Pauro rokuti: “Anofunga kuti akamira ngaachenjere kuti arege kuwa.”—1 VaK. 10:12.
MINYENGETERO YANEHEMIYA YAKAPINDURWA
12. Nei Nehemiya ari muenzaniso wakanaka kwatiri?
12 Chimbofunga nezvaNehemiya aishanda somudiri waMambo wePezhiya, Atashasta, mumakore okuma400 B.C.E. Nehemiya akaratidza muenzaniso wakanaka wokunyengetera nemwoyo wose. Kwemazuva, ‘airamba achitsanya achinyengetera pamberi paMwari’ nezvedambudziko raisangana nevaJudha vaiva muJerusarema. (Neh. 1:4) Nehemiya paakabvunzwa naAtashasta kuti nei chiso chake chainge chakasuruvara, ‘akabva anyengetera kuna Mwari wokumatenga.’ (Neh. 2:2-4) Zvakaguma nei? Jehovha akapindura minyengetero iyoyo uye akaita zvakabatsira vanhu vake. (Neh. 2:5, 6) Chokwadi izvi zvinofanira kunge zvakasimbisa kutenda kwaNehemiya!
13, 14. Tinofanira kuitei kuti kutenda kwedu kurambe kwakasimba uye kuti tikunde zvose zvinoitwa naSatani kuti atiodze mwoyo?
13 Kuramba tichinyengetera sezvaiita Nehemiya kunotibatsira kuti tirambe tiine kutenda kwakasimba. Satani haana tsitsi uye anowanzotiedza patinenge tisina kusimba. Somuenzaniso, kana tichirwara kana kuti takaora mwoyo, tingatanga kuona sokuti Mwari haanyanyokoshesa nguva yatinopedza muushumiri mwedzi woga woga. Vamwe vedu tinganetseka mupfungwa zvimwe nepamusana pezvakamboitika muupenyu. Satani anoda kuti tione sokuti hatibatsiri. Kazhinji anoda kukanganisa pfungwa dzedu onetesa kutenda kwedu. Zvisinei, kana tikava “vakasvinurira kunyengetera,” tinoita kuti kutenda kwedu kurambe kwakasimba. Chokwadi, ‘nhoo huru yokutenda, ichaita kuti tikwanise kudzima zvombo zvinopisa zvinoita zvokukandwa zveakaipa.’—VaEf. 6:16.
Kuva “vakasvinurira kunyengetera” kunotibatsira kuti titsungirire miedzo yakasiyana-siyana (Ona ndima 13, 14)
14 Kana ‘takasvinurira kunyengetera,’ hatizobatwi takarivara tokundwa nomuedzo wokutenda unongoerekana wauya. Patinosangana nemiedzo, ngatiyeukei muenzaniso waNehemiya tobva tanyengetera kuna Mwari ipapo ipapo. Tinogona chete kungokunda uye kutsungirira miedzo yokutenda kana tichibatsirwa naJehovha.
15. Mibvunzo ipi yatinofanira kuzvibvunza nezvokunyengeterera vamwe?
15 Jesu akatetererera Petro kuti kutenda kwake kurege kupera. (Ruka 22:32) MuKristu akatendeka wemunguva yevaapostora ainzi Epafrasi akatevedzera Jesu panyaya iyi uye akanyengeterera hama dzake dzaiva muKorose. Pauro akadzinyorera kuti, “Epafrasi, . . . anogara achizvishandisa nesimba nokuda kwenyu paanonyengetera, kuti pakupedzisira mumire makakwana muine chokwadi kwazvo nezvinhu zvose zvinodiwa naMwari.” (VaK. 4:12) Zvakanaka kuzvibvunza kuti: ‘Ndinozvishandisa nesimba kunyengeterera hama dzangu dziri munyika yose here? Kangani kandinonyengetererawo vandinonamata navo vari kutambura pamusana penjodzi dzinongoitika dzoga? Ndakapedzisira riini kunyengeterera vaya vari kutungamirira musangano raJehovha? Munguva pfupi yapfuura ndakanyengetererawo here vomuungano vari kusangana nematambudziko?’
16. Tsanangura kuti kunyengeterera kwatinoita vamwe kunokosha here?
16 Vamwe vanogona kubatsirwa chaizvo patinovanyengeterera kuna Jehovha Mwari. (Verenga 2 VaKorinde 1:11.) Kunyange zvazvo Jehovha asingamanikidzwi kupindura minyengetero nemhaka chete yokuwanda kwevanamati vake vanenge vachinyengetera vanyengeterazve, paanopindura minyengetero yavo, anofunga nezvechido chavanenge vanacho uye kunetseka kunobva pamwoyo kwavanenge vachiita. Saka tinofanira kunyengeterera vamwe, tokoshesa ropafadzo iyoyo. SaEpafrasi, tinofanira kuratidza kuti tinonyatsoda hama nehanzvadzi dzedu dzechiKristu nokushanda nesimba pakuvanyengeterera. Kuita izvi kunoita kuti tiwedzere kufara nokuti “kupa kune mufaro mukuru kupfuura kugamuchira.”—Mab. 20:35.
“RUPONESO RWEDU RWAVA PEDYO”
17, 18. Kuva “vakasvinurira kunyengetera” kuchatibatsira sei?
17 Asati ataura kuti “usiku hwafamba; kwava kuda kuedza,” Pauro akanyora kuti: “Munoziva mwaka, kuti yatova awa yokuti mumuke pahope, nokuti zvino ruponeso rwedu rwava pedyo kupfuura panguva yatakava vatendi.” (VaR. 13:11, 12) Nyika itsva yakavimbiswa naMwari yava pedyo, uye ruponeso rwedu rwava pedyo kupfuura zvatingafunga. Hatifaniri kurara pakunamata, uye hatitombofaniri kubvumira zvinhu zvenyika zvinotsausa zvichitipedzera nguva yedu yokuti tive toga tichinyengetera kuna Jehovha. Asi ngativei “vakasvinurira kunyengetera.” Kuita izvi kuchatibatsira kuti tirambe tichiita “mabasa matsvene omufambiro nemabasa okuzvipira kuna Mwari” sezvatinomirira zuva raJehovha. (2 Pet. 3:11, 12) Mararamiro edu achabva aratidza kuti tiri kuramba takamuka uye kuti tinonyatsobvuma kuti mugumo wenyika ino yakaipa wava pedyo chaizvo. Saka ‘ngatirambei tichinyengetera.’ (1 VaT. 5:17) Ngatitevedzereiwo Jesu nokunyengetera tiri toga. Kana tikatora nguva yakawanda tichinyengetera tiri toga kuna Jehovha, tichawedzera kuswedera pedyo naye. (Jak. 4:7, 8) Ikoko kuchava kukomborerwa chaiko!
18 Magwaro anoti: “Pamazuva aakanga ari munyama, Kristu aiteterera uyewo aikumbira Iye aikwanisa kumuponesa parufu, achichema kwazvo uye achisvimha misodzi, uye akanzwiwa nokuda kwokutya kwake Mwari.” (VaH. 5:7) Jesu ainyengetera achiita zvokuteterera uye kukumbira uye akaramba akatendeka kuna Mwari kusvikira paakafa. Izvi zvakaita kuti Jehovha amutse Mwanakomana wake waaida uye akamupa mubayiro woupenyu hwokusafa kudenga. Isuwo tinogona kuramba takatendeka kuna Baba vedu vokudenga pasinei nemiedzo yatingasangana nayo mune ramangwana. Zvechokwadi tinogona kuwana mubayiro woupenyu husingaperi kana tikaramba ‘takasvinurira kunyengetera.’
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Ivai Vakasvinurira Kunyengetera”